Mmelite ọgụgụ: nke (n'efu) ngwaọrụ iji, ọkwa site na ọkwa - Ọzụzụ Ọmụmụ
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » DSA » Mmalite nkwalite ọgụgụ: nke (n'efu) ngwaọrụ iji, larịị site na ọkwa
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma otu esi ahazi ọgwụgwọ na ọgụgụ (yana ogologo oge), otu esi emepụta ihe eji eme mmekọrịta na ọgụgụ na kedu usoro eji etinye aka na-egosi site na ihe akaebe, zụta usoro vidiyo "Mmezi nke ọgụgụ" (65 €). You nwere ike ịgbaso usoro vidiyo na ọsọ gị n'ihi na ọ nweghị ụbọchị mmebi. Usoro a na-adị mgbe niile ma vidiyo ọhụụ ọ bụla zụrụ bụ n'efu. Na mmechi, uzo ahu nwere ihe omuma banyere asusu abuo na igu akwukwo, ogugu na uzo, oru ndi isi na otutu ihe!
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ekepụtala ọtụtụ ngwa-ọrụ iji kwalite ọgụgụ akwụkwọ. N'isiokwu a, anyị na-anwa ịme usoro ụfọdụ site n'igosi, maka usoro nke ọ bụla, ngwaọrụ kachasị adabara. Anyị kpebiri ịgbaso ụzọ site na akwụkwọ ozi ruo na akụkụ ahụ a tụlere n'ọmụmụ ihe na-atọ ụtọ nke Squicciarini na ndị ọzọ bipụtara (Dyslexia, mpịakọta 3, 2019), na-agbakwunye na ha amaghị ngwá ọrụ anyị maka ịmepụta ọrụ. Iji iji usoro na nsonaazụ mee ka omimi ha bawanye, agbanyeghị, anyị na-ezo aka na ị gụọ isiokwu ahụ.
IHE: Dị ka a tụrụ aro na edemede nke Squicciarini na ndị ọrụ ibe anyị, ekwuola, na ọkwa nke akwụkwọ ozi ị nwere ike iji usoro nkuzi Precision, na-ekepụta Eriri akwụkwọ ozi ị gụrụ na sekọnd iri na ise, na-agafe na nke ọzọ naanị mgbe agụrụ nke gara aga na-enweghị njehie. Na mbu, aga-ezepu mkpụrụedemede ndị ahụ na-agbagọ agbasi anya na ihu igwe, mgbe ahụ enwere ike iwebata ndị a ma, n'ikpeazụ, mkpụrụedemede ukwu na obere mkpirisi ga-agwakọta.
TOOL: N'ime usoro izizi ọ nwere ike ịba uru ịhazi mkpụrụedemede ahụ, yana maka nke a ị nwere ike imepụta ndepụta nke leta Na-agụ Tachistoscope wee pịa bọtịnụ "Mepụta ndepụta na Pdf". Maka akwụkwọ ozi enyo, usoro ihe omume nwere ike ịba uru search Solver (site na itinye "leta enyo" na ntọala) ma ọ bụ, n'ụdị egwuregwu, Hawkeye.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Site na nyocha rue PDP: ụzọ abụọ enwere ike
IHE: Ihe aga - eme ka a mata ihe dị iche iche na - agụ ma na - agụ ihe dị iche iche, jiri nwayọ na - abawanye ike: CV - VC - CVC - CCV - CCVC - CCCVC.
Ngwa: Nwere ike iji ya mgbe niile Na-agụ Tachistoscope nke na-enye ohere ịmepụta okike syllable ma ọ bụ, maka njikwa elu na oke, SearchSolver. Ọzọkwa, na Onye na-emeputa kaadị PDF, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe mgbochi syllable na syllable search n'ime otu okwu ma ọ bụ eriri nke mkpụrụedemede.
Site na nkeji okwu rue okwu (ngwongwo syllabic)
IHE: Bido site na nkeji nkeji ndị amụrụla na ngalaba gara aga ma ọ bụ, ọ bụrụ na nwata amaraworị nke ọma maka nkeji okwu, ị nwere ike igwu egwu egwuregwu nke ihe edere ede na ịgụ mkpụrụ nwere usoro syllabic dị mgbagwoju anya.
Ngwa: Syllable site na nkeji na-enye gị ohere igosipụta otu mkpụrụ okwu n'otu oge, na-eme ka ndị ọzọ nwee nghọta na ọkara. Site na ịtọ ngwa ngwa ikpughe ọ ga-ekwe omume ịbawanye mgbatị ahụ na mmega ahụ. Koodu nzuzo na-enye gị ohere igwu egwu iji dozigharị okwu ahụ site na ijikọ ọnụ ọgụgụ na nkeji okwu ọ bụla na ịmaliteghachi okwu ahụ na njedebe. Na GameCenter na-agụỌzọkwa, ị ga-ahụ ọtụtụ egwuregwu mmemme syllable, ya na okwu bisyllabic (Ikpeazụ CV), trisyllabic (CVC izizi, Midia CV e Ikpeazụ CV).
Okwu niile (lexical phase)
IHE: Itinye ihe nlere anya na ọgụgụ isi dabere n'ọgụgụ ndepụta nke okwu ma ọ bụ n'ihe ngosipụta ha.
Ngwa: Gụ Tachistoscope, yana nnukwu mgbanwe dị n'ime ụlọ ebe edepụtara na idobe usoro, bụ ngwaọrụ kacha arụ na ngalaba a. Na mgbakwunye, ọ na-enye ohere iji bipụta ndepụta ọhụrụ ahụpụtara n'ụdị pdf, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na ngosipụta oge na ọgụgụ ọgụgụ n'ezie.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Vademecum maka ịrịọ ka anata ego maka ịga ya
IHE: Mee ka ọgụgụ dịkwuo mma n'ọgụ ahịrịokwu mgbe ị na-arụ ọrụ ịghọta ihe agụpụta.
Ngwa: Ilu (ọrụ 1 - ọrụ 2 - ọrụ 3) nwere ike ịbụ ụzọ na-atọ ụtọ na "obibi" iji rụọ ọrụ na ahịrịokwu. Egwuregwu ahụ Kpọpụta na-etinye ahịrịokwu ọgụgụ na idebe ozi na ebe nchekwa.
IHE: Oge ikpeazu, ebumnuche agụ n'ezie bụ ka ị ghọta ma ghọta amaokwu ndị a. Ọ bara uru iji ụdị ederede na-eme ka nwatakịrị nwanyị ahụ nwee mmasị na ụdị ọrụ a.
Ngwa: Ngwa weebụ Tachibrano ọ ga - enyere gị aka ịpị ederede wee tọọ ntọala metụtara ọsọ a na-enyocha ya na ụdị onye dị elu ga-etinye na okwu ahụ, na mgbakwunye na mmetụta nghọta nke akụkụ ndị ọzọ. N'ikpeazụ, n'ọgụgụ GameCenter, ị ga - ahụ egwu 4 (Ta - Àkụ áká - Ebumnuche - Ọnọdụ ahụ) nke ebumnuche bu ichota okwu efu. Ọrụ ọzọ chọrọ, nke gụnyekwara mgbanwe akụkụ, bụ nke ịgụ amaokwu ndị ọzọ, ebe amaokwu abụọ nke agba dị iche iche jikọtara ọnụ site na ị na-aghọrọ mkpụrụ okwu ọ bụla. You nwere ike iji ngwa web ọzọ wepụta abụ ọzọ.
N'ikpeazụ, n'ime GameCenter ọgụgụ will ga-ahụ ọtụtụ ndị ọzọ egwuregwu mejupụtara egwuregwu, okwu / oyiyi mkpakọrịta na mkpebi mkpesa, yana crossword egwuregwu na crossword egwuregwu!
Squicciarini, Nicoletti and Stella (2019), Nmezigharị agụ ọgụgụ dabere na ihe ndị sayensị kwuru: site na sublexical ruo lexical, Dyslexia vol. 16, n.3
dyslexia, dsa, free, ọgụgụ, ike, nweta nkwalite agụmakwụkwọ n'efu, ngụ ngụ na-agụghị agụ, ọgwụgwọ
Mmalite nkwalite ọgụgụ: nke (n'efu) ngwaọrụ iji, larịị site na ọkwa2020-05-122020-09-13http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/05/lettura.png200px200px
Ike dị anya na dyslexia. Meziwanye ọgụgụ n’agụghị agụEdemede, DSA, Ndozigharị, Ọgwụ
Usoro mmụta anyị dị n'ịntanetị "Mmezi nke ọgụgụ" na-arụ ọrụ!DSA